यी ७ कुरा भुलेर पनि देवतासगँ नमाग्नुहोस, अशुभ हुनेछ ! - Experience Best News from Nepal
यी ७ कुरा भुलेर पनि देवतासगँ नमाग्नुहोस, अशुभ हुनेछ !
प्रकाशित मिति : आइतवार, बैशाख ८, २०७६
हामी विश्वमा भएका सबै मानिसहरु आफ्नो फरक फरक धर्म भएपनि आफ्ना पुजा गर्ने मन्दिर, गुम्बा अथवा विभिन्न ठाउमा गएर आफ्ने देवतालाई पुजा गछौ । तर यस देवतालाई पुजा गर्नुको पछाडि सबैको एउटा न एउटा स्वार्थ रहेको हुन्छ ।
जब मानिस खुसी हुन्छ ,त्यसले कहिल्यैपनि देवताको पुजा गदैन् । तर जब मानिस कुनै पिडामा पर्छ तब उसले देवतालाई विभिन्न आफ्नो स्वार्थ अनुसारको वस्तुहरु माग्ने गर्दछ । त्यसैले तपाई पनि यसरी नै हेरक दिन पुजा गर्न जानुहुन्छ भने यस्तो कार्य भुलेर पनि नगर्नुहोस् । यदि यी कार्य गरेको मागेको फल नपाउने मान्यता रहेको छ । ती कामहरु यी हुन् ।
-पहिलो हो , शिव, गणेश अनी भैरवलाई तुलसी चढाउनु हुँदैन ।
-त्यसैगरी दास्रो हो , स्नान नगरी तुलसीको पातलाई टिप्नु हुँदैन । शास्त्र अनुसार यदि कुनै व्यक्ति ननुहाइ तुलसीको पात टिप्छ भने पुजा गर्दा यस्तो पात भगवानद्धारा स्वीकार हुँदैन ।
-तेस्रोमा तुलसीको पातहरुलाई ११ दिनसम्म बासी मानिँदैन । यसको पातहरुमा जल चढाएर पुन भगवानलाई अर्पित गर्न सकिन्छ ।
-त्यसैगरी चौथोमा यो दिन बिहिवार, एकादशी द्धादशी, संक्रान्ति तथा साँझमा तुलसीको पात टिप्नु हुँदैन ।
-पाचौमा सुर्यदेवलाई शंखको जलबाट अघ्र्य दिनु हुँदैन । भने बुधवार अनि बिहिवार पिपलको रुखमा जल चढाउनु हुँदैन । त्यसमा पनि दुवोलाई भने बिहिवार टिप्नु हुँदैन ।
-त्यसैगरी छैटौमा रहेको छ, प्लास्टिकको बोत्तल वा कुनै अपवित्र धातुको भाँडामा गंगाजल राख्नु हुँदैन । गंगाजल तामाको भाँडामा राख्नु सुभ मानिन्छ ।यसो गरेर केतुकीको फुल पनि शिवलिंगमा चढाउनु हुँदैन ।
-सातैमा चाही, कुनैपनि पुजामा मनोकामनाको सफलताको लागी दक्षिणा अवश्य चढाउनु पर्छ । र यस बेलामा माता लक्ष्मीको विशेष रुपले कमलको फुल अर्पित गरीन्छ । यस फुललाई पाँच दिनसम्म जल चढाएर पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले घरको मन्दिरमा विहान अनी साँझ दिप अवश्य बाल्नुपर्छ ।
यो साताबारे ज्योतिषशास्त्रले के भन्छ !! कसलाई लाभ र धन आर्जन कसलाई नराम्रो जान्नुहोस्
एउटै गोत्रमा किन विवाह गर्नु हुँदैन, यस्तो छ धार्मिक र वैज्ञानिक कारण !
सोमबारका दिन गर्नुस् यी पाँच काम मनले चिताएको पुग्छ !
वेद के भनेको हो, किन पढ्ने ?